It is me. Ko Niknayman.: သီတဂူဆရာတော်ကြီးရဲ့လိပ်ကလေးလိုနေ တရားတော်အား နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
sendspace မှာ download လုပ်ရင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ့်ဖိုင်ကို စာမျက်နှာ အောက်ဆုံးမှာ ပြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ချက်ချင်းဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ မရတာမို့ထပ်ကာတလဲလဲကြိုးစားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ ဖိုင်ပေါ်လာဖို့ အတွက် တစ်မိနစ် စောင့်ရပါတယ်။
နောက်စာမျက်နှာပေါ်လာရင် စောင့်ဖို့ စိတ်မရှည်ဖူးဆိုရင် click here ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ။
စိတ်ရှည်သည်းခံစွာနဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူပြီး နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ ဒီဖိုင်များကို ဒေါင်းလုပ်
လုပ်ပြီးမှ ပြန်လည်တင်ထားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Mediafire ဖြင့်လည်း ထပ်မံတင်ပေးပါမယ်။